Isi ihe na - emegharị aha gị ọzọ bụ Nhazi | Martech Zone
A na-akpali atụmanya ọ bụla na ndị ahịa dị iche iche, bịarute na azụmahịa gị site na ndị na-ajụ ase dị iche iche, nwere ebumnuche dị iche iche, na-achọ ozi dị iche iche, nọ na ọkwa dị iche iche nke njem ndị ahịa, ma tụọ anya ozugbo ịchọta ihe ha chọrọ. Ọ dịghị ihe na-ewe gị iwe karịa ijide gị mgbe ị na-achọ ime ihe ọzọ.
Ikekwe ọ bụ ihe dị mfe dịka ịkpọ oku maka ndị ahịa yana ijide ya na njedebe na-enweghị njedebe nke ndị ọrụ ọrụ ọrụ na oge echere. Ma ọ bụ, ikekwe ọ bụ ihe dị ka ịnwa ịtọọ oge ngosipụta mana usoro ntinye ụdị na-ebute njehie. Kedu ụzọ ọ bụla, ọ bụ nkụda mmụọ na nkụda mmụọ ahụ nke ndị na-azụ ma ọ bụ ndị ahịa na-eme mkpesa na ntanetị na ọha na eze.
Netwọk mmekọrịta enyego ụzọ ọhụụ dị ịtụnanya maka ndị na-azụ ahịa na azụmaahịa iji mee ka anụ olu ha. Ha anaghị atụ egwu iji ya. Mgbe akparamagwa a bidoro na ntanetị, ụdị ọ dị ka ọ bụ ihe ha tụfuru. Anyị edeela n'oge gara aga banyere ọnwụ izu okè, ma bụ ụdị n'ezie enweghi enyemaka?
Johann Wrede, Global Director General nke SAP Ahịa Ndị Njikọ, ekwetaghị ya. Enwere ike igbochi ya iji ahụmịhe nke onwe, ịkọ amụma ndu ma ọ bụ atụmanya, na itinye nhọrọ ndị ahịa chọrọ n'ihu ha n'oge ha chọrọ ya. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ - ọ bụrụ na ahụmịhe ahụ dị ịtụnanya - ndị ahịa agaghị eme mkpesa n'ịntanetị.
Gee ntị na Mkparịta ụka anyị na Johann Wrede
Gbalia ibudata Ntuziaka SAP maka nghọta na ịdebanye njem ndị ahịa. I nwere ike ịgụ ihe site na Johann na Ọdịnihu nke Azụmaahịa na Ndị ahịa Edge blọọgụ. Na n'ezie, lelee Njikọ Ndị Ahịa nke SAP ngwaahịa.
Dị ka onye ndu ahịa na ngwanrọ ngwanrọ ngwa ọrụ, SAP na-enyere ụlọ ọrụ nha na ọrụ aka ka mma. Site na ụlọ ọrụ gaa na ime ụlọ, ụlọ nkwakọba ihe na nchekwa, desktọọpụ na ngwaọrụ mkpanaka - SAP na-enye ndị mmadụ na ndị otu ọrụ aka ịrụ ọrụ nke ọma ma jiri nghọta azụmaahịa rụọ ọrụ nke ọma iji nọrọ n'ihu asọmpi ahụ. Ngwa SAP na ọrụ SAP na-enyere ihe karịrị 291,000 ahịa aka ịrụ ọrụ bara uru, gbanwee oge niile, ma too. Maka ama ndị ọzọ, gaa na sap.
Tags: aka ndi ahianjem ndị ahịaọdịnihu nke azụmahịajohann wredekeonwesapndị ahịa onu